Ministry of Ezvekutakura uye Zvivakwa kuti Tenga Mubatsiri Wekuongorora | RayHaber
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraMinistry yezvekutakura uye Zvivakwa kuti Tenga Mubatsiri Wekuongorora
02 / 12 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, Mabasa, GENERAL, musoro wenyaya, TURKEY
mubatsiri gurukota rezvekutakura nezvivakwa
Ministry of Ezvekutakurwa nezvivakwa Zvishandirapamwe ichazotora Vabetseri Vanoongorora; 8 iri mukirasi yeGeneral Administrative Services kuti ishandiswe muUngano Yezvekutakura uye Nzvimbo Dzekuongorora Yekutarisira. Kuti uite hurukuro yakavhurika ku5 (vashanu) Vanoongorora Mutevedzeri, iyo Assistant Assistant Inspector Entrance Exam ichaitwa sezviga zveMutemo pamusoro peKwayedza Services ye Minisitiri Yezvekutakura uye Zvivakwa.
Bvunzo yekupinda iyi inotevera;
1- ENTRY ExamINATION ZVINODA
a) Kusangana nemamiriro ezvinhu akataurwa muChinyorwa 657 yeCivil servants Law Nha. 48, (Vanyoreri vane kodzero yekuita ongororo yemuromo vachakumbirwa kunyoresa zvinyorwa zvavo zvematsotsi.)
b) Anenge makore mana ezvidzidzo zvekupedza kudzidza; Mutemo, Sayenzi dzezvematongerwo enyika, zveEconomic, Bhizinesi reHurumende, zveEconomic uye Administrative Sayenzi Zvemakore mana emakore ekudzidza zvishoma uye zvakaenzana kuzvikoro izvi zvakagamuchirwa neDare reDzidzo yepamusoro muTurkey kana nekune dzimwe nyika kuti apedze imwe yedzidzo yepamusoro.
c) Mune manyorerwo anofanirwa kuitwa kubva pakati pevachavhotera vanowana mashoma 2018 (Makumi manomwe) mapfumbamwe kana kupfuura kubva Type Type KPSS P2019 mamakisi mhando yePublic Manera Selection Exam (KPSS) yakaitwa neKiyera, Kusarudza uye Kuiswa Center (ÖSYM) mu48 uye 70; kuve mune yekutanga 100 (Mumwe Hundred) mumiriri maererano nehuwandu hwepamusoro mamakisi, (Kana huwandu hwevanyori hwakanyatso zadzisa zviyero zvebvunzo uye kupfuura 100 vanhu vari kupfuura 100 munhu, wekutanga 100 mumiriri achazotemerwa semhedzisiro yehuwandu hwepamusoro mamakisi uchaendeswa kuongororwa yekupinda uye XNUMX. Vachavhota / vavhoterwa vane mapoinzi akaenzana vachakokwa pabvunzo)
d) Kwete kuve pasi pezera re01 seye01 / 2019 / 35, (akaberekwa 1 Ndira 1984 uye gare gare)
e) Kuve nehunhu uye hunhu hweInternet,
f) Panyaya yehutano hwehutano, kuenda kumatunhu ese enyika, kukwanisa kushandira mune ese marudzi emamiriro ekunze uye mafambiro mamiriro, kudzivirira kuenderera kwebasa remuviri kana chirwere chepfungwa kana kuremara kwemuviri nekuremara, (Vamiriri vanokodzera kutora bvunzo nemuromo vachatorwa kubva kune yakazara-yakatsinhaniswa Yekuchipatara Hospitals Medical Board Report Rinozokumbirwa)
g) Kupedzisa, kuregererwa kana kumisikidzwa muchiuto kwevanhurume vevanoda kukwikwidza (Vanokwikwidza varume vanokodzera kutora bvunzo dzemumuromo vachadikanwa kuendesa chitupa chemauto.)
h) Kwete kuita sevhisi yekuzvipira kuita chero nzvimbo, (Saina ziviso inoratidza kuti havasi pasi pehusungwa hwekuzvipira kuchatorerwa kubva kune vanenge vapinda mvumo yekunyorwa bvunzo.)
i) Kutora bvunzo kekutanga kana kechipiri,
2- KUSVIRA MAHARA uye DZAKANYA
Vanyoreri vanoshuvira kutora chikamu mune Yekupinda Yekubvunzurudza, kutanga kubva pazuva rinotevera kuburitswa kwechiyedzo chebvunzo muRegional Gazette, chero bedzi vachikwanisa mamiriro akataurwa pamusoro, panguva pfupi yapfuura kusvika 16 / 12 / 2019 zuva neChishanu;
"Bazi Transport uye Infrastructure Ministry of odhita Services Directorate (Block, 6 Floor.) Basic Turayliç Caddesi No: 5, Postal Code: 06338, neEmeki Çankaya / Ankara / TURKEY"
Iyo kero inogona kuitwa mumunhu kana neakanyoresa tsamba. Zvekushandisa netsamba, iyo 16 / 12 / 2019 inofanira kusvika kune kero yakatsanangurwa neChishanu pamberi pamaawa ekushanda. Zvikumbiro zvisiri kutumirwa kuHurumende nekuda kwekunonoka kweposhure uye zvimwe zvikonzero kana izvo zvisingakwanise mamiriro akataurwa mukuzivisa hazvizoitwe.
Rondedzero yeavo vane kodzero yekutora yakanyorwa yekupinda bvunzo inogona kuwanikwa pane webhusaiti Ministry uab.gov.tr/duyuru pamusoro.
Vanokwikwidza vachanyorera bvunzo dzakanyorwa;
a) Fomu yemubati
b) Gwaro remhedzisiro yeKPSS (Nguva yeVimbiso nekunyatso bvunzwa uye macheki anozoitwa.),
c) Chikopi chaicho kana chakasimbiswa cheDhigirii redzidzo yepamusoro kana chekupedza kudzidza,
d) Pasipoti mapikicha e6 zvidimbu zvakatorwa mumwedzi yekupedzisira ye1 (mitanhatu),
e) Kopi yegwaro rezvitupa uye sampu yechivanhu vakanyorwa
Vanowedzera. Fomu rekunyoresa kukwikwidza rakabatanidzwa pachiziviso chakaburitswa pawebsite yeShumiro. Vanyori vane chekuita nekuita kwechokwadi kwemagwaro akapihwa mukushandiswa kwavo. Vanyori vanozoonekwa kuti havasakwanise zvinodiwa mukunyorera havakwanisi kutora chero kodzero. Kana zvinyorwa zvacho zvikaonekwa kuti zvine hunyengeri kana kuti ndeechitsotsi, nzira iri pamutemo inodiwa ichatanga kupesana anenge achikwikwidza.
3 - EXAM DATE uye DZIMA
Bvunzo dzekupinda rinozoitirwa muA Ankara mumatanho maviri, kutanga rakanyorwa uyezve nemuromo mune yakasarudzika nzira yekuyedza maitiro.
Icho chakanyorwa chikamu chebvunzo chichaitwa pa29 / 12 / 2019 nemusi weSvondo ku10: 00 “Ankara Yıldırım Beyazıt University Kitisheni yeMutemo 15 Chikuru Kuvaka Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Street Etlik / Ankara ”uye vanenge vachinyoreswa mukana wekunyora bvunzo vachaziviswa pane 18 / 12 / 2019 pane webhusaiti Ministry of Transport and Infrastructure (uab.gov.tr/duyurular) pane iyo XNUMX / XNUMX / XNUMX kero. mapepa ekupinda kubva pane ino peji. Kunze kweizvi, hapana chiziviso chinopihwa kune vanonyorera maererano neyekunyorwa yekupinda bvunzo.
Vanokwikwidza vachadikanwa kutora bvunzo dzakanyorwa negwaro ravo rekupinda (uab.gov.tr/duyurular), pamwe chete nekadhi ravo rezviziviso rine nhamba yeID kana mapasipoti ane nguva yekubvumidzwa inoshandiswa.
Mazita, zuva nenzvimbo yemubvunzo wemumuromo zvichaziviswa pawebsite yeShumiro (uab.gov.tr/announcements).
4- FOMU UYE ZVINANGWA zveWRITTEN ExAM
Bvunzo dzakanyorwa dzichaitwa pamwe ne5 (shanu) sarudzo maererano nesarudzo yakawanda yekuyedza maitiro. Mune bvunzo dzakanyorwa, vanenge vachizobvunzwa vachabvunzwa mibvunzo makumi maviri neshanu, ina ichava mapoinzi mana ebvunzo dzeMutemo, Economics, Finance neAccounting, uye 20 (makumi maviri) ichave mashanu paboka rimwe nerimwe renyorwa bvunzo yemitauro. Yese yakanyorwa nguva yekunyora inguva 120 maminetsi.
Zvinyorwa zvekunyora kwakanyorwa zvakanyorwa pasi apa.
a) Mutemo weConstitution,
b) General nheyo dzeMutemo wekutonga, Administrative Judiciary, Administrative Organisation,
c) Mutemo wekupara mhosva (General nheyo uye mhosva dzakanangana neHurumende),
C) Mutemo weHurumende (General Mfundo uye Kodzero Chaidzo),
d) Mutemo weZvakabvumirwa (Zvimwe Zvikuru),
e) Mutemo weCommerce (Bhizinesi Rekutengeserana, Makambani uye Negotiable Instruments Law),
f) Maritime Trade Law (General Nheyo, Zvepamutemo Regime dzeGungwa Nzvimbo, dzeMutemo Status uye Regulations of Turkish Matambudziko, Freight Contracts, Passenger Transport Contracts),
g) Mutemo wevashandi (General Misimboti, Mutemo weVashandi, Mutemo Wevashandi),
f) Kuuraya uye Kubhuroka Mutemo (General Mfundo),
C) Bhizinesi Ehupfumi,
3. pa mari
b) Veruzhinji Revenues uye Expenditures,
C) General Nheyo dzeTurkey Mutemo Mutemo,
b) Balance Sheet Kuongororwa uye Matekiniki,
c) Commerce Account,
5. RUGWARO RWEMutauro:
Kupinda bvunzo; zvakanyorwa uye nomuromo. Iyo bvunzo yakanyorwa ichave yakawanda-sarudzo. Vanyoreri vasina kubudirira pabvunzo dzakanyorwa havazopiwi kodzero yekupinda pabvunzo dzemumuromo. Giredhi yakazara mune yekupinda bvunzo ndeye 100, iyo yakaparadzaniswa nemapoka ebvunzo dzakanyorwa uye iyo imwechete mune yekuverenga pamuromo. Kuti utariswe uchibudirira pabvunzo dzakanyorwa, imwe neimwe yezviyero zvinowanikwa kubva kumapoka ebvunzo dzakanyorwa kunze kwemitauro yekune dzimwe nyika hazvifanirwe kunge zviri pasi pe60 uye avhareji haifanirwe kuve pasi pe70. Rwemutauro wekunze giredhi harizoverengerwa muavhareji uye rinozotorwa sechikonzero chekuda. Kupinda bvunzo mamakisi kunoverengerwa nekutora arithmetic avhareji yemuromo bvunzo mamakisi uye yakanyorwa bvunzo mamakisi evanobudirira vanobudirira mumuromo bvunzo. Mukusarudza huwandu hwebudiriro yevanobvunzwa, kana mayor ebvunzo dzekupinda dzakaenzana, mukwikwidzi ane hunyorwa hwepamusoro hwebvunzo, uye kana mhinduro yekupinda nebvunzo dzakanyorwa dzakaenzana, mukwikwidzi anenge aisa chikoro cheKPSS achave nekutanga. Mubairo we70 kana wepamusoro mukupinda bvunzo hautorerwe senge kodzero inowanikwa kune avo vari kunze kwehuwandu hwevashandi kuti vagadzwe.
Iye mumiriri we20 achakokwa kuti atange kunyora bvunzo nemuromo kubva kumunyorwa ane giredhi repamusoro kubva pabvunzo dzakanyorwa. Vanokwikwidza vane mucherechedzo mumwe chete sewemunyowani wekupedzisira achakokwa vachakokwa kumunongedzo wemuromo.
Mazita evanyoreri vanokodzera kutora pamuromo bvunzo, zuva nenzvimbo yekuongororwa nemuromo (uab.gov.tr/duyuru pamusoro.
Mune bvunzo dzemumuromo, vanokwikwidza; Pazvakawanda, mwero wekuziva munda nehungwaru, kuendesa nekumhanyisa, kugona kutaura, simba rekufunga, kukodzera, kumiririra kugona, maitiro uye kukodzera kumabasa, kuzvivimba, kugona kunyengetedza uye kutendeseka, kugona kwakawanda uye tsika yakawandisa, kuvhurika kwesainzi nekusimudzira kwetekinoroji kunoongororwa.
Kuti iongororwe kubudirira mune bvunzo dzemumuromo, arithmetic avhareji yezviyero zvinopihwa nemwe neumwe muongorori sachigaro uye nhengo dziri pazere chiyero che100 hadzifanirwe kunge dziri pasi pe70.
Iyo yekupinda bvunzo mamaki haifanirwe kunge ari pasi pe70 kuitira kuti ionekwe semubatsiri wekuongorora bvunzo.
Rondedzero yeavo vanozo nyoresa nzvimbo pamwe neyemavambo uye yepakutanga nhamba yezvakanyorwa uye nemuromo zvikamu zvekupinda bvunzo zvinowanikwa pane webhusaiti yeUshumiri (uab.gov.tr/duyuru pamusorouye mhedzisiro yemubvunzo yekupinda ichaziviswa kune vanozovhota tsamba yakanyoreswa.
6) ZVIMWE ZVESU
Iwo magwaro anodiwa pabvunzo uye nerumwe ruzivo rwakadzama (uab.gov.tr/announcements) unogona kuwanikwa kubva ku0312 203 10- (84) 0312 203- (18) ye Ministry of Transport and Infrastructure Inspection Services.
Vachavhara vanogona kuendesa zvichemo zvavo kumibvunzo yekubvunzurudza kana bvunzo zvawanikwa munguva pfupi yapfuura mukati me7 (Mazuva manomwe) mushure mekunyorwa kwekunyorwa mhinduro. (Mazana zana eTurkey Lira), iro risiti rakatambirwa nekuisa mari yekuramba, nyaya yezvipikiso uye kero yekutaurirana yakanyatso nyorwa muchikumbiro ku Ministry of Transport neInfidence Inspection Services.
Zvinoramba zvakaitwa mushure mekupera kwenguva uye zvikumbiro zvisina kana nhamba yemunyori, saina kusaina, kero uye kubhanga hazvibvumidzwe.
Mutevedzeri woMukuru weGurukota rezvekutakura…
TCDD Yekufambisa Yekufambisa Kunzvera Muongorori…
TCDD Inozivisa VaWinner of Assistant Inspector Exam
Akashanda seMubatsiri Muongorori paTCDD AŞ
TCDD Transportation Inc. 9 inotora mubatsiri anoongorora
TCDD Kutakura Mutsigiri Mutsva Wakaziviswa!
Handover mu Minisitiri yeZvekutakura nezvivakwa…
100 Mazuva Ose Kuronga Chirongwa Ulaştırma
Kubva kuSevhisi yeZvekutakura uye Zvivakwa kusvika kuDhiri reMuchinjiko…
February Kudengenyeka kwenyika muHurumende yekutakura uye Infrastructure
Istanbul Ministry of Transport